विश्व कै पहिलो होटल जुन सुनै सुनले बनेको छ , कति छ एक रातको भाडा ? – News Nepali Dainik
सोमबार ०७ आषाढ २०७८
नेपालमा भेटियो “डेल्टा भेरियन्टमा नयाँ म्युटेसन”
आयो सर्बसाधारणलाई खुसिको खबर : काठमाडौंमा अब बारअनुसार पसल खोल्न पाइने, कुन दिन कुन पसल खुल्छन्?
नेपालमै भयो यस्तो, मोटरसाइकल चढाएर भित्र्याइयो बेहुली
खुशिको खबर सुध्रियो निशाको स्वास्थ्य, देखियो यस्तो परिवर्तन
आफुलाई सामाजिक अभियान्ता बताउने ज्वाला संग्रौला, शर्मिला वाइवासहित तीनजना प्रहरी हिरासतमा
बाढी, पहिरो र डुबानले १७ जनाको मृ’त्यु
विश्व कै पहिलो होटल जुन सुनै सुनले बनेको छ , कति छ एक रातको भाडा ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २९, २०७७ समय: २१:१९:५४
विश्वकै पहिलो सुनको होटल भियतनामको राजधानी हनोईमा खुलेको छ। उक्त होटलका दरवाजा, कप, टेबल, ढोका, बाथरुम, खाने भाडाकुँडा लगायत सबै कुरा सुनका रहेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। २ जुलाई अर्थात बिहिबार यो होटलको उद्घाटन गरिएको हो।
उक्त होटलको नाम डोल्से हनोई गोल्डन लेक राखिएको छ। होटलका गेट देखि चिया खाने कपसम्म सबे सुनका छन्। २५ तले उक्त होटल फाइभ स्टार होटल हो। होटलमा ४ सय कोठा छन्। होटलको बाहरी भित्तामा करिब ५४ हजार वर्ग फीट गोल्ड प्लेटेड टाइल्स लगाइएको समाचार एजेन्सी एपीले जनाएको छ।
होटल स्टाफको ड्रेस कोड रातो र सुनौलो राखिएको छ।
होटल भित्र पस्ने मानिसलाई सुनौलो महसुस होस भनेर सबै कुरा सुनका बनाइएको। बाथरुम देखि नुहाउँने सबै सामानहरु सुनौलो छन। बेडरुममा फर्निचरका सबै सामान सुनौला राखिएको छ। छतमा इन्फिनिटी पूल बनाइएको छ। जहाँबाट हनोई शहरको रौनक दृश्य हेर्न पाइन्छ।
उक्त होटलको निर्माणकार्य सन् २००९ मा शुरू गरिएको थियो। निर्माण कार्य सम्पन्न हुन करिब २ सय मिलियन डलर खर्च गरिएको थियो। सुनौलो रंगले मानिसलाई तनाव कम गर्न मद्दत पुयाउँने र आनन्द दिलाउँने हुनाले सुनौलो होटल बनाइएको होटेल व्यवस्थापनले जनाएको छ।
होटल विभिन्न प्रकारका रुम राखिएका छन् । मानिसहरुले आफ्नो रोजाइले कोठा छान्न सक्दछन् । डबल बेडरुम भएको एक सुनौलो कोठामा एकरातको भाडा १ लाख २० हजार तोकिएको छ।यस्तो होटल विश्वमै पहिलो पटक खुलेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
Last Updated on: February 11th, 2021 at 9:22 pm
२६४ पटक हेरिएको
बाल आश्रममा गायिका एलिना चौहानले मनाईन जन्मदिन (भिडियो)
मेलम्ची बाढीमा हेलम्बुदेखि २२ किलोमिटर बगेको गर्भिणी भैँसीको सुखान्त कथा
चारवटा आँखा, दुईवटा मुख र दुईवटा कान भएको अनौठो बाछो जन्मियो , अचम्म मान्दै हेर्नेको भिड!!!
Good job sir क्याप्टेन विजय लामा ५०० घरलाई पुग्ने खाद्यान्नसहित यसरी पुगे ,आफ्नो ज्यानको प्रवाह छैन तर कोहि म र्नु हुदैन् ,यशो भन्छन् उनी (हेर्नुस् भिडियो
आँचल भन्छिन्- पल शाह रियल हिरो, देशलाई अक्सिजन बाँड्ने मान्छे महानायकभन्दा माथि